ⓘ အောင်နိုင်၊ ဒေါက်တာ (ဆေး/သု)
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်၊ ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အဖ ဦးထွန်းအောင်နှင့် အမိ ဒေါ်ရင်မေတို့က ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း သုံးယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသား ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် အထက ၇ ဗိုလ်တထောင်မှ အထက်တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ တိုင်းရင်း ဆေးပညာ သုံးဘာသာ စာမေးပွဲကို ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ဖြေဆို အောင်မြင်သည်။ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာ M.B.B.S. ဘွဲ့ကို ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဆေးပညာ မဟာသိပ္ပံ ဆေးဝါးဗေဒ ဘွဲ့လွန် ဒီဂရီကို ၁၉၈ဝ မှ ၁၉၈၃ ခုနှစ်ထိ ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ တွင် တက်ရောက် အောင်မြင်သည်။ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ D.M.A. ကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် သမားတော် စာစောင်တွင် မြင့်ဦး ကလောင် အမည်ဖြင့် ဆောင်းပါးများ စတင် ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ မှ ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်အထိ မန္တလေး တိုင်းရင်းဆေးသိပ္ပံတွင် လက်ထောက် ကထိက အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကင်းမြို့နယ် ကြက်ခြေနီ အသင်း အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ဆေးသုတေသန ဦးစီးတွင် သုတေသန အရာရှိ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် တိုင်းရင်းဆေး ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ် အတွင်း ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်တွင် စီမံချက် မန်နေဂျာ အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
အဆင့်မြင့် အနောက်တိုင်း ဆေးဝါးဗေဒ ပညာရပ်များကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန် တက္ကသိုလ်၌ လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့၊ ဟူဘေးပြည်နယ် တက္ကသိုလ်နှင့် ဘေးဂျင်းမြို့ တိုင်းရင်းဆေး တက္ကသိုလ်တို့တွင် တရုတ် ဆေးပညာနှင့် ဓာတ်အပ်စိုက် ပညာတို့ကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗာရာဏသီမြို့ရှိ ရှိဘာနာရားစ် ဟိန္ဒူ တက္ကသိုလ်တွင် အာယုဗေဒ အဆင့်မြင့် ဆေးပညာရပ်များကို လည်းကောင်း ဆည်းပူးခဲ့သေးသည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် တိုင်းရင်းဆေး ပညာ ဦးစီးဌာန ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းဆေး ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် ၂ စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။ ယခုအခါ နက္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်း၊ သုခချမ်းသာ မဂ္ဂဇင်းတွင် အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ဒေါက်တာအောင်နိုင်သည် မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ နိုင်ငံများသို့ ဆေးပညာ လေ့လာရေး ခရီးများလည်း သွားရောက်ခဲ့သည်။
ဆရာသည် အမှတ် ၃၀၊ ဆေးရုံလမ်း၊ ပြည်သာယာရိပ်သာ၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် ဇနီး ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်း၊ သားသမီး သုံးဦးတို့နှင့် အတူ နေထိုင်ရင်း စာပေများ ဆက်လက် ရေးသားလျက် ရှိသည်။
2. ရေးသား ပြုစုခဲ့သော စာအုပ်များ
၁။ ပွဲတွေ့ကုထုံး လိုရာသုံး ၁၉၉၁
၂။ သုတအဖြာဖြာ တိုင်းရင်းဆေးပညာ ၁ ၁၉၉၀
၃။ သုတအဖြာဖြာ တိုင်းရင်းဆေးပညာ ၂ ၁၉၉၁
၄။ သုတအဖြာဖြာ တိုင်းရင်းဆေးပညာ ၃ ၁၉၉၂
၅။ သုတအဖြာဖြာ တိုင်းရင်းဆေးပညာ ၄ ၁၉၉၆
၆။ သုတအဖြာဖြာ တိုင်းရင်းဆေးပညာ ပေါင်းချုပ် ၂၀၀၀
၇။ ကျန်းမာရေး သုတ အဖြေလွှာ ၁ ၁၉၉၈
၈။ ကျန်းမာရေး သုတ အဖြေလွှာ ၂ ၁၉၉၉
၉။ ကျန်းမာရေး သုတ အဖြေလွှာ ၃ ၂၀၀၁
၁၀။ ကျန်းမာရေး သုတ အဖြေလွှာ ၄ ၂၀၀၂
၁၁။ ကျန်းမာစေကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းများ ဒေါက်တာအောင်နိုင် + ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်း ၁၉၉၆
၁၂။ ရောဂါသုတ ဆေးသုတ ၂၀၀၁
၁၃။ နိုင်ငံတကာရိုးရာ ဆောင်းပါးများ ဒေါက်တာအောင်နိုင် + ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်း ၂၀၀၂
၁၄။ တရုတ်ရိုးရာ ဓာတ်ပြင် လက်နှိပ်ဗေဒ ၂၀၀၂
၁၅။ ဖွေဖွေရှာရှာ တိုင်းရင်းဆေးပညာ ၂၀၀၅
၁၆။ မြန်မာမှုနှင့် တိုင်းရင်း ဆေးပညာ ၂၀၀၆
၁၇။ သက်ရှည်ကျန်းမာ တရုတ်ရိုးရာ ဓာတ်စာ ၂၀၀၆
Wikipedia: အောင်နိုင်၊ ဒေါက်တာ (ဆေး/သု)